Ying ကဒုတိယ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးကနေတစ်
ငါတို့သည်ငါတို့၏အသိုင်းအဝုိင်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောကြောင့်ကားတစ်စီးခွဲဝေမှု၏အနီးကပ်ခင်မင်ရင်းနှီးအတွက်သက်သေခံတော်မူချက်ကိုနားထောငျတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်ပွဲလမ်းသဘင်ချိုးမီ, ကျွန်တော်အမြဲငှားတစ်ဦးကကားပေါ်တွင်သူ့ကားထွက်ရှိပြီးသူကို Ying ကဒုတိယ, အတူတက်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Ying ကဒုတိယနဲ့တှေ့ဆုံကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကားကိုစာရင်းပြုစုစေဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်း, သူဖန်တီးခဲ့သောမိတ်သူကတခြားကားကိုပိုင်ရှင်များအတွက်ခဲ့လည်းအကွံဉာဏျကိုပေးတော်မူ၏။
ငါမရှိတော့အလုပ်မှာမကျေနပ်မှုသည်းခံနိုင်ရှိရာငါ့အသက်ကိုတစ်ဦးပွိုင့်ရောက်ရှိနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာရှာအံ့သောငှါအကြှနျုပျစိတျကိုထစေ၏။ ဒါဟာငါအချို့ငွေရှာဖို့ငါ့အကားတစ်စီးထွက်ငှားရမ်း၏စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မငှားတစ်ဦးကမော်တော်ကားရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့် Toyota Aygo တူသောအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောကားတစ်စီးရထွက်ငှားရမ်းပိုင်ခွင့်တဦးတည်းသောအသိပညာတယ်။ ငါသည်ငါ့ကားကိုငှားတစ်ဦးကကားများနှင့်အငှားပိုက်ဆံအတွက်လာမယ့်စတင်ခဲ့အောက်ပါနေ့ကမှတ်ပုံတင်တယ်, ငါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာတဦးတည်းဝယ်ယူသေချာစေခဲ့သည်။
သငျသညျတူညီသော drivers တွေကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုသင့်ကားထွက်ငှားခဲ့ဖူးပါသလော
ဟုတ်ကဲ့, သူတို့ကိုအများကြီး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ထားသောတင်းကျပ်စွာချစ်ကြည်ရေးငါ့ကားကိုယူတစ်နာရီခန့်အဘို့အ commutes သူကိုပေတရု ဟူ. ခေါ်ဝေါ်တဦးတည်းသီးခြားလူတစ်ဦးရှိပါသည်။ တစ်နေ့မှာငါ့အကားတစ်စီးဟာစက်ပြင်များက fixed ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်တော်အဘို့ငှါလာသောအခါ, ငါကြင်နာစွာသူ့ကိုငါ့ကိုက fixed ရှိသည်ဖို့အချိန်ပေးဖို့ကိုပြောသည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? သူက fix ကမ်းလှမ်းသောအခါငါကမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ သူဟာလေ့ကျင့်သင်ကြားစက်ပြင်ခဲ့တယ်, ငါမရှိ, စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထိုနေ့ရက်ကိုသူကအခမဲ့ကားတယ်, ငါ fixed ရကပြုပြင်တာတွေများအတွက်ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
သင်သည်သင်၏စျေးနှုန်း overrate ပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ client များသူတို့ကအတူတူပင်န်ဆောင်မှုများအတွက်တခြားနေရာလျော့နည်းပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်စဉ်ကိုပိုမိုပေးဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့နာမည်တစ်ခုလုပ်ရောင်းစျေးသတ်မှတ်စဉ်ကအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။ ပထမဦးဆုံးလအနည်းငယ်, သင် clients များဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆည်းပူးဖို့စျေးနှုန်းအပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးပေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျနောက်ပိုင်းမှာအနည်းငယ်စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် client များသည်အပြောင်းအလဲကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျသာယာသောနှင့်လူတိုင်းဖို့ထောက်ထားဖြစ်သင့်သည်။ အမြဲတမ်းသူတို့ကကားလာသောအခါသူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အချိန်ရ။ အဆိုပါဆင်တူတဲ့ကားတစ်စီး features တွေအကြောင်းကိုသူတို့ကိုသင်ပေးပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့အမြဲတမ်းသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အိမ်တွင်ခံစားရပါစေ။
ကားသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သန့်ရှင်းထိန်းသိမ်းပါ။ ဒါကယာဉ်မောင်းနှင့် client များနှစ်ဦးစလုံးရန်သင့်ယာဉ်ကိုပျော်စရာပါလိမ့်မည်။
အမြဲရိုးရိုးသားသားဖြစ်လိမ့်မည်။ သင် drivers တွေကိုသူတို့ကတစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာမဆိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားဖို့ကယူရှေ့တော်၌ထိုကားတစ်စီးရှိပြီးမည်သည့်ပြဿနာများ၏သိစေသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်ရုံကားမောင်းသူနှငျ့ဆကျဆံရေးကောငျးထိန်းသိမ်းခြင်း၏မျက်နှာကို ထောက်. အဘို့သင့်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်အချို့သော hits အပေါ်တာဝန်ယူရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒါဟာယခုပြီးတော့အနည်းငယ်ချိုနှင့်ခြစ်, ရှောင်ရှားရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းသူတို့သငျသညျရငှားရမ်းခပိုက်ဆံအားဖြင့်ဖွင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ကြပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ကားကိုမကြာခဏငှားရသေချာအောင်လုပ်ပါ။
Great Thailand ကား Conundrum